#Guddiga dib u heshiinta beelaha Galmudug oo sheegay in ay soo gaareen Liiska ergada shirka ka qayb galaysa
By WARIYAHA MUQDISHO On Aug 16, 2019
Guddoomiyaha guddiga qaban-qaabada shir-weynaha dib-u-heshiinta Galmudug, Dr. Cabdiraxamaan Cabdullaahi Baadiyow iyo Xubnaha kale ee guddiga ayaa kormeeray xarunta loogu tala galay in uu ka dhoco shir-weynaha dib-u-heshiinta iyo goobaha ay degayaan ergada ka qayb geleysa shirka.
Dr. Cabdiraxamaan Cabdullaahi Baadiyow ayaa sheegay in lasoo gebagebeeyay diyaar garowga shirka ayna diyaar yihiin dhammaan waxyaabaha aasaasiga ah ee ku xeernaa shirka, dhammaan dhinacya shirka ka qeyb geli lahaana ay liiska ergada u soo direen guddiga.
Guddoomiyaha guddiga ayaa caddeeyay in ay dhimantahahay oo kali ah in ergada la keeno magaalada Dhuusamareeb si 17-ka bisha uu u si rasmi ah u furmo shir-weynaha dib-u-heshiinta Galmudug.
Gudoomiyaha ayaa intaas ku daray in ay soo gaareen liiska ergooyinka shirka dhowaan ka furmi doona magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud.
Magaaladda Dhuusamareeb ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa gaaray ergo badan oo la sheegay in ay ka qayb galayaan shirka dib u sheshiinta Galmudug kaas oo maalinta bari ah lagu wado in uu ka furmo Magaaladda Dhuusamareeb.